Fiantrana sy fangorarahana, asan’ny Fanahin’Andriamanitra
"Iza moa amin'izy telo lahy no ataonao ho naman'ilay azon'ny jiolahy? Ary hoy izy: Ilay niantra azy. Dia hoy i Jesosy taminy: Mandehana hianao, ka mba manaova toy izany koa." — Lio. 10:36,37.
Tsy azon'ny fo itoeran'i Kristy atao ny tsy hanana fitiavana. Raha tia an'Andriamanitra isika satria efa tia antsika taloha Izy, dia ho tia ireo rehetra izay nahafatesan'i Kristy koa isika. Tsy azontsika atao ny ho tonga hifandray amin'Andriamanitra raha tsy tonga mifandray amin'ny olombelona isika, satria eo amin'Ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'izao rehetra izao, dia tafaray ny maha-Andriamanitra sy ny maha-olombelona. Raha tafakambana amin'i Kristy isika dia tafakambana amin'ny mpiara-belona amintsika amin'ny alalan'ny masom-by volamenan'ny rojon'ny fitiavana. Amin'izay dia haseho eo amin'ny fiainantsika ny indrafo sy ny fangorahan'i Kristy. Tsy hiandry ny hitondrana ny sahirana sy ny mahantra eo amintsika isika. Tsy ilaintsika ny hiangaviana vao hahatsapa ny fahorian'ny hafa. Handeha ho azy ho antsika ny hiasa ho an'ny sahirana sy ny mijaly, toa an'i Kristy nandehandeha nanao soa.
Na aiza na aiza misy hery manosika ho amin'ny fitiavana sy ny firaisam-po, na aiza na aiza ny fo no mitsotra hitahy sy hanondrotra ny hafa, dia ao no miseho ny asan'ny Fanahy Masin'Andriamanitra. Amin'ny toerana maha-lalim-paka ny fanompoan-tsampy, dia misy olona izay tsy manana ny fahalalana ny lalan'Andriamanitra voasoratra, izay tsy mbola nandre na oviana na oviana ny anaran'i Kristy, nefa nampiseho toetra tsara fanahy tamin'ny mpanompony ka miaro azy ireo na dia mety ho nihatra tamin'ny ainy aza izany. Mampiseho ny asan'ny herin'Andriamanitra ny fihetsiny. Ny Fanahy Masina no nampitoetra ny fahasoavan'i Kristy tao am-pon'ny tsy mpino ka nampifoha ny firaisam-pony mifanohitra amin'ny toetrany, sy ny fanabeazana noraisiny. Ny "mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin 'izao tontolo izao" - Jao. 1:9, no mamirapiratra ao amin'ny fanahiny, ary ho fahazavana io, raha voatandrina, dia hitarika ny diany ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra.
Ny voninahitry ny lanitra dia ao amin'ny fanandratana ny lavo, amin'ny fampaherezana ny ory. Ary na aiza na aiza no hitoeran'i Kristy ao am-pon'ny olombelona dia haseho amin' izany fomba izany Izy. Na aiza na aiza no ihetsehan'ny fivavahan'i Kristy, dia hisy fitahiana. Na aiza na aiza Izy no miasa dia hisy famirapiratana.
Tsy misy fanavakavahana ny amin'ny firenena, ny amin'ny firazanana, ny amin'ny foko izay eken'Andriamanitra. Izy no mpamorona ny taranak'olombelona manontolo. Fianakaviana izay tamin'ny alalan'ny famoronana ny olombelona rehetra, ary iray koa ny fanavotana. — HF, tt. 337-338.